Iidonki ezinkulu zeSondo eziThengiswayo zithengiswa ngexabiso eliphantsi
Thenga eyona dolphic yesondo iphambili
Sithengisa zonke iintlobo zoonodoli abakhulu beempundu. Ngamnye unokudibanisa kunye neempawu ezizodwa. Umzekelo, udibaniso lwamabele amakhulu kunye neempundu ezinkulu, ukudibanisa amabele amancinci kunye ne-butt enkulu, njl., Unokufumana idoli ehambelana nencasa yakho apha. Ibala lolusu nobude bazo nazo zahlukile. Apha ungahlangabezana neemfuno zakho zesiko.Ngokwembono yendaleko, idonki enkulu yesilic yesini luphawu olunomtsalane amadoda aye alujonga njengolubalulekileyo ukutyhubela iminyaka.
I-Annabelle -156cm Amabele amakhulu eSondo oMdaka oMdaka uBrown oMkhulu oMdaka oMdaka
amava akho craziest ngesondo akanakuba ngaphandle Big esile ngesondo onodoli
Ukuba uthanda okulungileyo I-100cm enkulu yeedonki zesini okanye i-108cm i-esile enkulu ye-esile yesondo apha uya kufumana eyona nto ingcono kakhulu! Njengendoda, ngokuqinisekileyo uthanda i-silicone ye-11kg enkulu ye-3d yesondo. Ewe, unodoli omkhulu we-esile uthandwa kakhulu kwiimarike. Ngokuba I-128 cm ibele elikhulu leesile elinodoli wesondo zisoloko zinencindi eninzi kwaye zingqukuva iimpundu ezinkulu. Abantu bathanda isondo kunye nonodoli omkhulu wesini.Xa ubona i-esile enkulu endleleni kunye ne-esile yakhe ebhala ngasekhohlo & ekunene naphezulu naphantsi, etsala amehlo abo bonke abangamadoda, ngaba awufuni ukufaka i-dick yakho enkulu ungene ezimpundu kwaye uvumele iimpundu zakhe ezinkulu phantsi kwakho zothuke ngakumbi?
Iindidi ezahlukeneyo zoonodoli bee-esile ezinkulu ziyafumaneka kwii-urdolls
Ukusuka kwimarike yoonodoli besondo yangoku, kukho iintlobo ezininzi oonodoli besini abakhulu baseAsia, oonodoli abakhulu be-esile abakhulileyo bezesondo, oonodoli abakhulu be-sex milf, iesile elikhulu unodoli wokwenene wesini kunye ne-esile enkulu yesini unodoli we-torso njalo njalo, kule Apha, unokufumana eyona nto ifunwayo Iziduko zesondo, ngaphandle, Bonke ubungakanani obupheleleyo I-TPE sex doll, unodoli wesondo we-milf, unodoli wesondo we-blonde, unodoli wesondo omkhulu wamabele, unodoli wesondo okhulelweyo kwivenkile yethu unokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.